huge tool lists!!!!
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Websites Sharing » huge tool lists!!!!
1 huge tool lists!!!! on 15th October 2009, 7:54 pm
အကြိုက်ပဲ၊ နှစ်သက်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ၊ ဘာတွေလဲတော့သိဘူး [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] ၊ tools ပေါင်းမျိုးစုံအောင်ရှိပါတယ် ၊ သူ့ topic နဲ့သူ အစုံပဲ ၊ 2005
လောက်ကနေ့ 2009 အထိ updated တွေပါ ရှိတယ် ၊ ကျွန်တော်တောင် ဆိုက်ရဲ့ တစ်ဝက်လောက်တော့ ဒေါင်းထားပြီးပြီ [You must be registered and logged in to see this image.] ။ အဲ.....ဘယ်ဟာ
ကဘယ်လိုသုံးတယ် ဆိုတာကိုတော့ ဒီက ဂုရုကြီးများ ရှင်းပြကြပါခင်ဗျာ ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
Last edited by kyawmin on 15th October 2009, 8:11 pm; edited 1 time in total
2 Re: huge tool lists!!!! on 15th October 2009, 7:57 pm
သွားကြည့်လိုက်ဦးမယ် ဘာ တူးတွေရှိလဲဆိုတာ။
ဘယ် တူးက ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို အပေါ်က ဂုရုကြီးလဲ ရှင်းပြမှပေါ့။
3 Re: huge tool lists!!!! on 15th October 2009, 8:10 pm
$ƴǩǾ wrote: ဟုတ်ကဲ့
မနောက်ပါနဲ့ ဦးရယ် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] ။ ဘာမှ မသိလို့ မသိဘူးပြောတာပါဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.]
4 Re: huge tool lists!!!! on 15th October 2009, 8:29 pm
မိုက်တယ်ဗျာ........ကျေးဇူးပဲ......ဘယ်ကနေများရလာလည်းဗျာ......ဘာ tools တွေလည်းတော့သိဘူး.....ဒေါင်းလိုက်တာတော့အများကြီးပဲ....ဟီးဟီး.....
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်.....နောက်လည်းဒီလို အသုံးဝင်တဲ့ site လေးတွေ....တင်ပေးနိုင်ပါစေဗျာ...... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: huge tool lists!!!! on 15th October 2009, 8:39 pm
သိုင်းကျူး ရေလယ် တင်တယ် ဗျို့ 
ဒေါင်းထားပဲ .. [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: huge tool lists!!!! on 19th October 2009, 11:25 pm
ကိုကျော်မင်းကြီးနော်... သိသားနဲ့ ။ မယုံကြနဲ့ဗျို့။ သူဒေါင်းထားတာ တစ်ဝက်ကျော်နေပြီ။ စမ်းပြီးလောက်ရောပေါ့။ ကျွန်တော်တောင် သူပြောပြလို့နည်းနည်းတောင်စမ်းပြီးနေပြီ။ သိချင်ရင် သူ့မေး သိတယ်ရယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
7 Re: huge tool lists!!!! on 20th October 2009, 3:54 am
ပို့တယ်နော်............မသိပါဘူးဆိုနေ [You must be registered and logged in to see this image.] ။
8 Re: huge tool lists!!!! on 23rd October 2009, 10:43 pm
ဒီမှာလည်း ရှာကြည့်ကြဦးနော် ..တွေ့လို့ ပြောလိုက်တယ် ..
9 Re: huge tool lists!!!!